पर्वतको फर्सेमा बाढिले ४५ घर जोखिममा, एक घर पुरियो, मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो - News site from Nepal
पर्वतको फर्सेमा बाढिले ४५ घर जोखिममा, एक घर पुरियो, मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
पर्वत- निरन्तरको वर्षाका कारण वस्ती माथिवाट आएको बाढिका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नं. ८ फर्सेका २५ घर परिवार विस्थापित बनेका छन् ।
बस्तीको बिचमा रहेको ठाडो खोल्सा (सात्खोसी) मा आएको बाढीका कारण एक घर पुरिएको छ भने आसपासका २५ घर पुणर् रुपमा विस्थापित बनेको जलजला गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष हरिविकास जिसीले जानकारी दिनुभयो । बाढिका कारण उक्त गाउँमा रहेका ४५ घरनै जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार खोल्सामा लेदो आउन थालेपछि मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानविय क्षति हुन नपाएको हो । स्थानीय खड्कबहादुर केसीको घर बाढिले पुरिएको हो जिसीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बाढिका कारण पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने झोलुङ्गे पुल समेत जोखिममा परेको छ भने बेनी-मालढुंगा सडक समेत विहानदेखि अवरुद्ध बनेको जिसीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी सिंचाईको कुलो समेत भत्किएको छ ।
निरन्तर वर्षा भएकाले खोल्सा आसपासको बस्तीका बासिन्दाहरुलाई स्थानीय शिव माध्यमिक विदालय फर्से र आफन्तको घरमा स्थानान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वस्ती माथिको ५० रोपनी भन्दा बढि जंगलनै धाँजा फाटेको अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिनुभयो । ‘वर्षा नरोकिए ठुलो क्षति हुने सम्भावना छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले ठुलो वर्षा भएकाले सम्भावित जोखिम हुन नदिन स्थानीय वासीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको छ । वर्षा नरोकिने बेला सम्म सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरिएको र स्थानीयवासीहरु नजिकेको विद्यालय वा आफन्तकोमा आश्रय लिएर बसेको प्रहरी निरिक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
पहिरोले मध्पहाडी लोकमार्गको पर्वत-बागलुङ सडक खण्ड समेत गएरातीदेखि अवरुद्ध बनेको छ भने अझै संचालनमा आउन सकेको छैन ।